Dowladda Eritrea oo qirtay in ciidamadeeda ay ka qeybgaleen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Eritrea oo qirtay in ciidamadeeda ay ka qeybgaleen dagaalka gobolka...
Dowladda Eritrea oo qirtay in ciidamadeeda ay ka qeybgaleen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia
Eritrean soldiers wait in a line on September 11, 2018 to cross the border to attend the border reopening ceremony with Ethiopians as two land border crossings between Ethiopia and Eritrea were reopened for the first time in 20 years in Serha, Eritrea. – diplomacy border trade (Photo by Stringer / AFP)
Dowladda Eritrea ayaa qirtay in ciidamadeeda ay ka qeybgaleen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia laakin waxa ay wacad ku martay in ay la soo bixi doonto xilli uu sii kordhayo cadaadis caalami ah.
Madaxa gargaarka ee Qaramada Midoobay Mark Lowcock ayaa Khamiistii u sheegay Golaha Ammaanka in inkastoo Abiy uu sameeyay ballanqaad, haddana aysan jirin wax caddeynaya in ciidamada Eritrea ay ka baxayaan gobolka.
Dadka deegaanka ee gobolka Tigray ayaa dhowr jeer oo hore Eriteriyaanka ku eedeeyay kufsi wadareed iyo xasuuq ka dhacay goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka Axum iyo Dengolat ee waqooyiga dalka Itoobiya.
Previous articleBaarlamaanka Puntland oo sheegay in ay qaadaceen muddo kordhinta golayaasha dowladda federaalka.
Next articleTaliska Booliska oo xiray 10 ka mid ah ciidan diiday in ay weeraraan guriga Jeneraal Saadaq Joon..
Somaliland ayaa sheegtay in cudurka Covid-19 uu kusoo laba kacleeyay, dadka xanuunka laga helayaana ay kasii bateen intii hore. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka...